Owayengumdlali webhola udayisa imoto ukuze ezokhipha eyesondlo | News24
Owayengumdlali webhola udayisa imoto ukuze ezokhipha eyesondlo
Johannesburg - Indodana yesinye sezikhulu zePSL esasingumdlali webhola lezinyawo, igama laso eligodliwe ngezizathu zomthetho, kubikwa ukuthi idayise unyanyavu lwemoto yayo yohlobo lwe-Range Rover ngemali engu-R785 000 ukuze izokwazi ukuthola imali yesondlo semali engu-R200 000 yesondlo eyikweleta inkosikazi yayo.
Le ndoda, eyayiyisihlabani sebhola, yayalelwa ukuba ikhokhele umkayo imali kodwa yakwazi ukukhipha imali yezinyanga ezinhlanu kuphela, ngemuva kokucela inkantolo ukuba ithi ukukhululwa emalini yesondlo njengoba ingakwazi ukukhipha le mali, kubika iSunday World.
Kubikwa ukuthi unkosikazi wale ndoda wafaka isicelo sokuthi ikhokhe le mali yesondlo iminyaka emihlanu noma ize iphinde ishade futhi.
Kodwa ezinyangeni ezinhlanu, lesi sihlabani saveza ukuthi asisakwazi ukukhokha le mali ngoba kakusihambeli kahle ngasemasentini.
OLUNYE UDABA:Obejola ufake umyeni enkantolo ngelesondlo
Ngokusho kwamaphepha aseNkantolo eNkulu yaseGoli ngesonto eledlule, umyeni uthe okufunwa yinkosikazi kuphindaphindwa kane emholweni wakhe wenyanga ongu-R60 000 waphinde wamsola ngokufihla eminye imininingwane emayelana neholo kanye nempahla yakhe enkantolo.
Lo mdlali kuthiwa usole inkosikazi yakhe ngokuba nempahla yemali engu-R3 million kwelinye izwe nokuthi yenza ihaba ngomholo wakhe ngemizamo yokuba avalelwe ejele ngokuhluleka ukukhipha kahle imali yesondlo.